Maxaa ka jira wararka sheegaya in Man United ay heshiis shaqsi ah la gaartay Bruno Fernandes? wariye Nicolo Shira ayaa ka warbixiyay. – Gool FM
Abdirashid Mohamud July 2, 2019
(England) 2 Luulyo 2019. Manchester United ayaa lagu soo warramayaa iney heshiis shaqsi ah la gaartay kabtanka Sporting Lisbon (Bruno Fernandes), waxaana la filayaa inuu noqdo saxiixa saddexaad ee xagaagan ay sameyso Red Devils.
Kadib guulahii ay ka gaartay kooxda saxiixyada Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka, waxaa la sugayaa magac oo kale oo ka mid noqda kooxda ka hor inta aysan horaanta bishaan u duulin wadanka Australia, halkaas oo ay kulamo fasax ah kusoo ciyaareyso.
Sean Longstaff ayaa sidoo kale ka mid ah liiska xiddigaha ay dooneyso Man United, balse arrintiisa ma ahan mid ku socota si dar-dar ah.
Warar ka imaanaya talyaaniga ayaa sheegaya in isniintii ay kulmeen wakiilo ka socda Man United iyo wakiilada xiddiga reer Portugal, kuwaas oo isla fahmay wax walba.
Nicolo Shira oo ah wariye ka tirsan Gazzetta dello Sport ayaa twitter-ka ku baahiyay hormarka ay Red Devils ka gaartay wadahadalada ay la yeelatay wakiilada Bruno Fernandes.
Waxaa la fahamsan yahay iney dhiman tahay heshiis ay wada gaaraan labada kooxood, Red Devils waa laga soo diiday dalab 31 Malyan oo Pound ah maadaama Sporting ay dooneyso wax ku dhaw 50 Malyan oo Pound.
Waa kuma xiddiga kaliya ee ka tirsan Xulka Argentina ee huba in lagu soo bilaabi doono kulanka Brazil? Mana ahan Lionel Messi.